M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka baaqday Safarkiisii Degmada Boocame Maxa is bedelay? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka baaqday Safarkiisii Degmada Boocame Maxa is bedelay?
Allhadaaftimo January 15, 2020 Uncategorized
Kadib markii ciidamo ka tirsanaa Puntland ay ku biireen ciidamada maamulka Somaliland isla markaasna deegaanka Boocame oo ka tirsan gobolka Sool awood kula wareegeen iyaga oo taabacsan Somaliland ayaa waxaa soo baxaya warar ku aadan ciidamadaasi.
Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa helay xoggo tibaaxaya in madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo qaar kamid ah gollaha wasiirada Puntland ay baajiyeen safaro kala duwan oo ku tagi lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Sool.
Axmed Karaash oo ay weheliyaan Wasiirada Caafimaadka, Amniga, Arrimaha gudaha, Maaliyadda iyo Waxbarashadu ayaa qorshihiisu ahaa in uu booqdo deegaano ay kamid yihiin degmada Boocame ee gobolka Sool, halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ciidamo ka goostay Puntland oo u galay Somaliland.
Ujeedka socdaalkiisa ayaa lagu sheegay in uu kormeer ku sameeyo deegaano dhowr ah, waxaana Boocame uu doonayey madaxweyne ku xigeenku in uu kula kulmo ciidamada ka goostay Puntland si uu uga dhagaysto cabashooyinkooda iyo baahiyaha horyaala hasa yeeshee qorshaha Karaash ayaa mar qudha is badalay kadib markii Somaliland ay bilowday dhaq dhaqaaqyo ciidan lana faray saraakiisha ciidamada Somaliland in ay weerar ku qaadaan cid kasta oo ka socota dhanka Puntland iyo waftiga Karaash.
Previous Wasiir Xigeen ka tirsan Puntland & Koox la socotay oo dirqi ku bad baaday ???
Next Mayerkii Degmada Taleex Puntland Oo Xilkii Iska Casilay Laguna Soo Dhaweeyey Gobolka Sool